सुस्मा मल्ललाई आमाको मनै छुने यस्तो संदेश,अन्ततः खोलिन आमाले भित्री रहस्य,यस्तोसम्म गरेछन,बास्तबिकता यस्तो!(भिडियो हेर्नुहोस) – osnepal tv
सुस्मा मल्ललाई आमाको मनै छुने यस्तो संदेश,अन्ततः खोलिन आमाले भित्री रहस्य,यस्तोसम्म गरेछन,बास्तबिकता यस्तो!(भिडियो हेर्नुहोस)
रुकुम जाजरकोटमा केही समय अगाडी निकै दुख लाग्दो घटना घट्न पुग्यो । त्यस घटनाका बारेमा अहिले विभिन्न टीका टिप्पणी भैरहेको छ । आज आमाले सुस्मा मल्ल ठकुरीलाई मनै छुने संदेश दिएकी छिन । भनिन्छ प्रेम सन्सारकै सबैभन्दा राम्रो अनि प्यारो हुन्छ ।
प्रेमको आँखा हुदैन। घनी गरिब जात धर्म केही हेरिदैन साचो मायामा भन्ने भनाइ उखान मात्र जस्तो भएको छ । बिचरा नवराज बिक एक दलित परिवारमा जन्म लिएअ । यसमा न त उनको पाप थियो न त गल्ती नै,एक युवतिको प्रेममा चुर्लुम्मै डुबेका उनी भबिस्यका मिठा मिठा सपना देख्न थाल्दै गर्दा सन्सार नै छोडेर जानुपर्यो । आफुभन्दा माथिल्लो जातकी केटिसङ प्रेम गरेकै कारण उनले कलिलैमा आफ्नो ज्यान फाल्नु पर्यो ।
उनका धेरै सपनाहरु अनायसै टुटेर गए त्यो साथ सबै छुटेर गए । परिवारमा एक्ला छोरा उनी आज सबैलाई छाडेर भगवानका प्यारा भए । घरमा सबैको रुवाबासी चल्यो । सबै आतिदै डराउदै नवराजलाई खोज्दै छन । चेलीबेटीहरु रुदारुदै बाटैमा ढले । पूरा देश नै शोकमा डुब्यो । आज आमा मिडियामा आएर रुदै यस्तोसम्म सुनाइन कि हेर्नेको मन धुरुधुरु रुनेछ मुटु दर्हो हुनेले मात्र तलको भिडियो हेर्नुहोला
Previous article नवराजको प्रेमिका भनिएकी युवती पहिलो पटक बोलीन्,सोच्दै नसोचेको यस्तो रहस्य बहिरियो (भिडियो हेर्नुहोस)
Next article रुकुम-जाजरकोट:दिदिले रु दै खोलिन नयाँ रहस्य,भित्री कुरा यस्तो पो रहेछ,यो हेर्दा को रु दैन होला( भिडियो सहित)
नवराजको प्रेमिका भनिएकी युवती पहिलो पटक बोलीन्,सोच्दै नसोचेको यस्तो रहस्य बहिरियो (भिडियो हेर्नुहोस)
रुकुम-जाजरकोट:दिदिले रु दै खोलिन नयाँ रहस्य,भित्री कुरा यस्तो पो रहेछ,यो हेर्दा को रु दैन होला( भिडियो सहित)